प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा कसले राख्यो ‘पोर्न’ भिडियो ? - Mitho Khabar
प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा कसले राख्यो ‘पोर्न’ भिडियो ?
February 16, 2020 mithokhabarLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीको वेबसाइटमा कसले राख्यो ‘पोर्न’ भिडियो ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नामबाट खोलिएको वेबसाइट दुरुपयोग भएको छ । उक्त साइटमा ‘पोर्न’ भिडियो कहाँबाट कसले अपलोड गर्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन । आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश लुइटेलले लेखेको समाचार अनुसार केपी शर्मा ओली डटकम (Kpsharmaoli.com )मा अश्लील सामग्री राखिएको बारे सरकारले अनुसन्धान तीब्र बनाएको छ ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत जानकारी समेटिएको वेबसाइट लामो समयदेखि दुरुपयोग भएको पाइएको छ । सरकारले दुई वर्ष अघि पोर्न साइटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रधानमन्त्रीकै नामको डोमेनमा भने सयौँ पोर्न भिडियो अपलोड भएको छ । आईटी कम्पनी सञ्चालकका अनुसार सरकारले यो वेबसाइट नेपालभर नखुल्ने बनाउन सक्छ । यो मात्र समाधान भने होइन ।
यो डोमने प्रधानमन्त्रीका नाममा भएकाले यसको असर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्मै रहन्छ । नेपालमा नदेखिने बनाउनेभन्दा पनि सरकारले यो डोमेन प्रदायक कम्पनीसँग समन्वय गरी फिर्ता गर्नुपर्ने आईटी विज्ञको सुझाब छ । प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार अस्गर अली प्रधानमन्त्रीका नाममा डोमेन दर्ता गरेर कसैले दुरुपयोग गरेको स्वीकार गर्छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीका नाममा डोमेन दर्ता गरेर गलत काम गर्ने व्यक्तिको खोजी भइरहेको छ । यस विषयमा प्रहरीसँग समन्वय गरेका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘डटएनपी भए हामी सिधै बन्द गर्न सक्थ्यौँ, तर डटकम भएकाले सम्भव छैन ।’ उनका अनुसार यो साइट नेपालमा बन्द गर्ने तयारी छ ।
टेलिकमले ल्यायो रिचार्ज बराबरकै बोनस योजना, आजै लागू हुने
March 25, 2020 mithokhabar
नेपाल टेलिकमले शुरू गर्‍यो ७७ जिल्लामै फोरजी सेवा